88 Mapeji Matemplate Ekugadzira Iyo Yakakwana Resume | Ndinobva mac
88 Mapeji matemplate ekugadzira iyo yakakwana kutangazve
Ignacio Sala | | Mac App Store, Mac zvirongwa
Kana tichigadzira gwaro kubva pakutanga, zvinokwanisika kuti kana tisingafarire dhizaini, tine nguva yakaoma yekutanga kunyora izwi rimwe chete. Neraki, isu tinokwanisa kushandisa matemplate kutanga kuwana pfungwa yezvatinoda. Matemplate anotibvumidza isu kugadzirisa ese maficha egwaro, tichivaita sevanenge vari vedu. Kunyange Microsoft Word ndiyo yakanakisa kunyorera inowanikwa mumusika Uye iyo yatinogona kugadzira chero rudzi rwegwaro, Apple Mapeji zvakare iri imwe nzira chaiyo, kunyanya izvozvi sezvo iri yemahara zvachose kune vese vashandisi vane Apple ID.
Kana zvasvika pakugadzira kutangazve, uye zvinonzi nemunhu akaona vazhinji muhupenyu hwake hwese nekuda kwebasa rangu, zvinofanirwa kutarisirwa mupfungwa kuti ndezve kupa ruzivo rwakanyanya munzvimbo diki diki inogoneka, ruzivo rwakakosha, saka kuti kana tangoenda kubvunzurudzo yebasa isu tinogona kuwedzera iyo data inoenderana neruzivo rwedu uye nebasa rapfuura. Uye zvakare, ayo aesthetics inofanirwa kuve inokwezva zvakakwana kuti ikwanise kuwana ruzivo rwese nekukurumidza pasina kushandisa nguva yakawandisa pairi.
Dzorerazve Mate - Dhizaini matemplate eMapeji ndiyo mhinduro kwayo kune izvo zvido zvekugadzira yakakwana kutangazve. Ichi chishandiso chinotipa isu kusvika makumi masere nemasere emhando matemplate, matemplate atinogona kugadzirisa muzvinhu zvese kuti zvienderane nezvinodiwa nevashandisi vese. Dzorerazve Mate - Dhizaini matemplate neMapeji ane mutengo wenguva dzose we4,99 euros, asi kwenguva yakati wandei tinogona kuirodha mahara. Inoda macOS 10.10 kana gare gare uye 64-bit processor. Iyo nzvimbo inodikanwa yekuisa iyi application ndeye 180 MB uye tinogona kuikanda kuburikidza neinotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac zvirongwa » 88 Mapeji matemplate ekugadzira iyo yakakwana kutangazve
Ivo vakabviswa, pane nzira here yekuvatora izvozvi? Ndokutenda zvikuru
Pindura kuna Nicolas
AudioNotes chishandiso chitsva chekuteedzera odhiyo manotsi paMac
Kana ini ndikaisa SSD disk muMac, ndinofanira kugadzirisa TRIM?